Meizu Halo, ekweisi Bluetooth na eriri na-enwu gbaa ka ọ bụrụ mmetụta abalị | Akụkọ akụrụngwa
Meizu Halo, ekweisi Bluetooth na eriri na-enwu gbaa ka ọ bụrụ mmetụta abalị
Meizu na-eweta akụrụngwa ọhụrụ ya maka afọ a 2018. Na mgbakwunye na ịkpọsa smartphones ọhụrụ, ọ bụkwa ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike na ngwa. Dị ka Xiaomi, Meizu nwere akụrụngwa zuru ezu nke na-ere azụ azụ iji buru ihe niile anyị chọrọ. Nke ahụ kwuru, otu n'ime ndị protagonists nke oge a bụ Meizu Halo.
Ekweisi aghọwo otu n'ime mmetụta nke oge ndị a. A na-ejikwa eriri ndị ọzọ enweghị eriri; ntụgharị: site na NFC ma ọ bụ njikọ Bluetooth. N'okwu ikpe ikpeazụ, Meizu Halo pụtara, ihe ọzọ, na mgbakwunye na ịnye onye ọrụ ihe ngwọta ikuku, kwa awade a nnọọ mma nhọrọ.
Eeh, anyị emehieghị n'ịgwa gị na ọ bụ igweisi Bluetooth ọbụlagodi na ọ nwere eriri. Ma nke ahụ bụ Meizu Halo ndị a na-enye eriri USB na-egbuke egbuke nke ga-abụ ihe mmetụta n'abalị ma ọ bụ ka anyị na-eme egwuregwu n’ụtụtụ isi ụtụtụ; a ga-ahụ isi nke onye ọ bụla nọ na mpaghara ọkụ. N'aka nke ọzọ, ekwuru na eriri a, nke ga - enyere anyị aka izu ike site na ekweisi, nwere ike ịkọwa na ụzọ abụọ: acha ọbara ọbara ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị ga-onwe gị site na a ngwa onye na-achịkwa akụkụ a.
N'otu aka ahụ, Meizu Halo jikọọ na nke anyị smartphone site na Bluetooth 4.1 na Ha ga-enwe ikike nke aka ha ruo awa iri na ise ma ọ bụrụ na anyị eleghara ọkụ ọkụ ọkụ anya ma ọ bụ ruo elekere 5 - karịa karịa maka ọzụzụ, dịka ọmụmaatụ - ọ bụrụ na ejiri ọkụ ọkụ (na 50 percent nchapụta).
A ka ga-ekwenye ma ọ bụrụ na ekweisi Bluetooth a ga-ahapụ obodo ha, China, ebe ha ga-amalite ire site na njedebe nke ọnwa Eprel na ọnụahịa nke ihe dị ka euro 128 na ọnụego mgbanwe ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Meizu Halo, ekweisi Bluetooth na eriri na-enwu gbaa ka ọ bụrụ mmetụta abalị
Andres Cazaux dijo
Ya mere na ha na-ezu gị ohi n'abalị n'okporo ámá hahaha
Zaghachi Andrés Cazaux
Leaked GTA V na a ọhụrụ Zelda dị ka o kwere omume kpakpando nke Nintendo Gbanye maka E3 2018